Who are they?: Time machine ကို မြန်မာ ပြည်က ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်စွာထွင်လိုက်နိုင်ပြီ
Time machine ကို မြန်မာ ပြည်က ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်စွာထွင်လိုက်နိုင်ပြီ
စောစောက သန်းရွှေ ကိုယ်ရံတော်ဆိုတဲ့ကောင် ဓါတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်။
အဲဒီ ကောင်ကိုကြည့်ပါ အကောင်းစားနာရီနဲ့ ၀တ်ဆင်ထားတာက အမေရိကန် စစ်တပ်ကို ပုံတူကို အတင်းရော
အဓမ္မရော ကူး ချပစ်လိုက်တဲ့ သန်းရွှေ ကြီး ရဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဆင်ယဉ်ပေးသနားထားပုံဖြစ်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာမှာ ဂျပန်သတင်းထောက်ကို ပစ်သတ်သွားတဲ့ စစ်သားကို သတိထားမိမှာပါ
သူနဲ့ မတန် တဲ့ ယူနီဖောင်း ညစ်ပေပေ စုတ်ပြတ်ပြတ်ကို ၀တ်ရင်း ခြေညှပ်ဖိနပ်နဲ့ အဟာရမပြည့်တဲ့ရုပ်နဲ့။
မြန်မာ့တပ်မတော် ရဲ့ စစ်သား ချင်း အတူတူတောင်မှ သန်းရွှေ အနား က ဖင်လျှက်ဆားဖြူး အနားပြာ လုပ် ပေးနေတဲ့ ကောင်တွေနဲ့ သာမာန် စစ်သား တူပါသလား ။
မြန်မာ့တပ်မတော် က စစ်သားတိုင်းမပြောနဲ့ ဗိုလ်ပေါက်စ တောင် အဲဒီကောင်လို ၀တ်နိုင်ဆင်နိုင် နေနိုင်စားနိုင်ပါ့မလား။
ရှင်းပါတယ် သန်းရွှေဟာ သူ့အနား က ကိုယ်ရံတော်တပ်ကို ပဲ စစ်သားထင်တာ သူ့ တပ်မတော်လို့ သတ်မှတ်တာ ဖြစ်တယ်။ သန်းရွှေနဲ့ သန်းရွှေ ကို နာခံတဲ့ကောင်တွေ သာ ကောင်းစား အောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်။
ဟေ့ကောင်ထိပ်ပြောင် ဖင်လေး သိန်းစိန်..........ဟေ့ကောင် ငပေါ ကျောက်ရူး ကျော်ဆန်း.... ဟေ့ကောင် ခွေးမသား ငပွား ခင်ရီ ....ဆိုတာနဲ့ လေးဖက်ကလေး ပြေးထောက် တအီအီ အော် အမြီးက ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် မထွက်လာတော့ သူ တို့ခမျာ ဖင်ကို ယမ်းရတာ ခါနေတာပေါ့ ။ သန်းရွှေ ရှေ့ မှာ အဲလို လေးဖက် ထောက် တအီအီအော် ဖင်ကို ခါးချိအောင် ယမ်း နေနိုင်တဲ့ကောင်တွေ သာလျှင် လူလူသူသူ ၀၀လင်လင် စားသောက် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာကြတာပါ။
သံသယတော့ဖြစ်မိပါတယ် ခုအချိန်မှာ ၀၀ မဲမဲ အပေါက်ဆိုး ဆိုး ပုပြတ်ပြတ် နံစော်စော် အသက်ကြီးပြီးအချိန်မစီး ပဲ ငါးမိနစ် တခါ ဖင် ပြန် ကုတ်နေတဲ့ သေခါနီးကြီးတယောက်ဟာ ၀ုန်း ဆို စစ်ယူနီဖောင်းဝတ် ပုခုံးပေါ် ကြေးကြယ်သီးတွေ ဘရာစိုနဲ့ပွတ်ပြီး စီတင် ကြိုက်တဲ့ စစ်တပ် စစ်ဌာနချုပ်ကို ၀င် ပြီး ဟေ့ကောင်တွေ ခွေးမသားတွေလို့ ခပ်ကျယ်ကျယ် အော်လိုက်ရင်တော့ ..............
Time machine ကို မြန်မာ ပြည်က ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်စွာထွင်လိုက်နိုင်ပြီလို့ တောင် ကမ္ဘာက သံသယရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ အဲဒီ တပ်စခန်း ဌာနချုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်မှန်သမျှ
လေးဖက်ကလေးတွေထောက် ဖင်ကလေးတွေယမ်း လျှာကလေးတွေ တွဲလွဲချလို့ တအီအီအော်နေကြမှာဖြစ်လို့ ပါပဲ ။ အဲဒီ အခါ Time machine ကို မတီထွင်နိုင်သေးပေမယ့် တော်သလင်းလကို တမုဟုတ်ချင်း ပြန်ရောက်သွားသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး ကျနော်တို့လဲ ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့ အတုအယောင် Time machine နဲ့
တမွန်းတည့်လောက်တော့ ဂုဏ်ယူချင်ရင်တောင် အဆင်ပြေသွားနိုင်သေးတော့ဗျား.............။
Posted by Who are They? at 12:40 AM
သန်းရွှေသမီးတွေ နဲ့ အလယ်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှုးကတော်...
မြန်မာလူထုအတွက် အကျိုးမရှိသော ပိုက်လိုင်းများ
ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု - စီးပွားရေးမဖွံ့ဖြိုးရခြင်း၏ အဓိ...
ထိုင်းစစ်တပ်များ ချထားတာဟာ ရဲရဲ့အကူ အညီတောင်းခံလ...
အသတ်ခံရတဲ့ ဂျပန်သတင်းထောက်ရဲ့ video လက်သိပ်ထိုး ရေ...
သံဃာ့ လှုပ်ရှားမှုအား အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခဲ့သည့် ကြ...
တူရကီ တွင် ကားတိုက်မှုဖြစ်ပွါးရာ..ဗမာ ၁၈ ယောက်သေ
Time machine ကို မြန်မာ ပြည်က ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်စ...